झलनाथको अर्थ के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki उद्देश्य विवरण
द्विध्रुवीय विकार के हो?
मानौं तपाईं ऋणको लागि आवेदन गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं पनि पैसा संग के गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि थाहा छ र यो आज धेरै मानिसहरूसँगको मामला हो। जसले पनि ऋणको लागि लागू गर्दछ आज सामान्यतया थाहा छ कि उसले पैसाको लागि पैसा चाहिन्छ। धेरै मानिसहरूले यो घर किन्नु र अरूलाई एउटा कार किन्नुको लागी एक ऋण लिन्छन्। अब तिनीहरू क्रेडिटको लागि आवेदनमा पहिले नै हुनुपर्छ उद्देश्य विवरण छोड्नुहोस्। यसले सुलभ र राम्ररी सोच्न लगाउनुपर्दछ। तपाईं भन्न सक्नुहुन्न कि तपाईलाई नयाँ कारको आवश्यकता छ किनकि तपाईंको छिमेकी X ले खेलकुद कार खरिद गरेको छ र तपाईं केवल जारी राख्न चाहानुहुन्छ।
कुनै पनि अवस्थामा, तपाईंले एक राम्रो जाँचकर्तालाई दिनु पर्छ र आफैलाई भ्रामक नदिनु पर्छ। यदि तपाई नयाँ वस्तु किन्न चाहनुहुन्छ भने, किनभने परिवार बढ्दै गएको छ वा शायद फरक कारणको लागि, यो निश्चित रूपले राम्रो असुरक्षा हो। कुनै पनि अवस्थामा, तपाइँ अग्रिम मा धनको बारेमा छलफल गर्न पहिले आफ्नो बैंक सल्लाहकारलाई सम्पर्क गर्नै पर्छ। आज एक ऋण प्राप्त गर्न सजिलो छ। तपाईं केवल फर्म नौकरी र सम्भवतः एक ग्यारेन्टी चाहिन्छ जसले तपाईंको लागि संकेत गर्दछ। कुनै पनि अवस्थामा, तपाइँलाई यो निश्चित गर्न को लागी कि तपाईलाई आवश्यक सबै कुरा छ जब यो ऋणको लागी आवेदन गरिरहेको छ। प्राय बैंकहरू पनि तपाईंलाई अनुदान दिने उत्सुक छन्। जो पनि योजना बनाउँछ र सोध्न सघाउन सक्दैन बैंकले अस्वीकृतिको अपेक्षा गर्नु पर्छ।
त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई सधै तपाईलाई थाहा छ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाई निश्चित रूपले केहि पछुतो नदिनुहुनेछ र त्यस पछि पछि गल्ती गर्न सक्नुहुनेछैन। उजुरी क्रेडिट भन्दा अघि दिइनेछ। तपाईंले यो कथन लेखमा लेख्नु पर्छ। यद्यपि पेआउट वास्तवमा यो उद्देश्यमा बाँधिएको छ, तर यो निश्चित रूपमा क्रेडिट प्राप्त गर्न एक निश्चित तरिका हो। आज जो कोहीलाई पैसा चाहिन्छ वास्तवमा जान्छ। सामान्यतया इच्छाहरू अति उत्कृष्ट छैनन्। यदि तपाइँसँग अझै पनि ठूलो इच्छा छ र तपाईं यसलाई आफ्नो वित्तीय स्रोतको साथ तिर्न सक्दैन, तपाईं क्रेडिट बारे सोच्नु पर्छ। तथापि एक क्रेडिटमा, तथापि, यो प्राय: बिल्कुल छैन। ध्यान दिनुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ पनि दायित्वहरू छन्।
त्यसैले तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाईं आफ्नो क्रेडिटको साथ गलत जान सक्नुहुन्छ। तिनीहरू निश्चित हुनैपर्छ कि तिनीहरूले सबै कुरामा ध्यान दिएका छन्। यदि तपाईं जान्नुहुन्छ भने तपाइँ चाहनुहुन्छ, र यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि निश्चित रूपमा बैंक द्वारा प्रदान गरिएको क्रेडिट प्राप्त गर्न कुनै समस्या छैन। बैंक तपाईंको लागि सदैव छ र ऋणको बारेमा सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ। त्यसैले तपाईं सबै कुरा ठीक गर्न निश्चित हुनुहुन्छ र यसलाई पछ्याउन पछि पछि। यो प्रश्नहरू सँधै पेश गर्नुपर्दछ। यदि तपाईं यति राम्रो लेख्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंको बैंकरले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। तथापि, राम्ररी बहस गर्न सक्षम हुनु। यदि सबै कुरा पूर्णतया जान्छ भने, यो निश्चित रूपमा असुरक्षा र क्रेडिट संग काम गर्नेछ। सामान्यतया, यो प्रतिबद्धता वा रद्द हुने समय भन्दा लामो समय लाग्दैन। एक रद्द तपाईंको लागि हो, तर तपाईं सरल र इमानदार हुनुपर्छ। यो प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नको लागि यो एक महत्त्वपूर्ण शर्त हो। आज अधिक से अधिक मान्छे को इच्छाहरु लाई पूरा गर्न चाहन्छन। त्यसपछि पनि सोध्नुपर्दछ।
अघिल्लो लेखस्थिर ब्याज दर
अर्को लेखसाथीहरूको-सहकर्मी उधारो